China kpochigoro nwughari anatomical 120 Celsius efere (otu oghere họrọ abụọ di iche iche nke ịghasa) ụlọ ọrụ na-emepụta | Shuangyang
Multi-axial Distal Femur kpochidoro efere
Multi-axial Olu nke Humerus ckingkpọchi efere
Φ8.0 Usoro Mpụga Fixator usoro - Proxim ...
anatomical orbital n'ala efere
1.5 onwe mkpọpu ala ịghasa
anatomical titanium ntupu-2D gburugburu oghere
kpochidoro nwughari anatomical 120 Celsius efere (otu oghere họrọ abụọ iche iche nke ịghasa)
Ihe: ọgwụ titanium dị ọcha
Ejiri okpukpu nke okpukpu, nke na-ejighị n'aka, ọrịa na-adịghị efe na nkwarụ ọkpụkpụ.
• Nwugharia oru oma:
Maka oge mbụ ma ọ bụ nwughari nke abụọ, eji maka ọkpụkpụ ọkpụkpụ ma ọ bụ nkwarụ nke ọkpụkpụ ọkpụkpụ dissociative (Ọ bụrụ na ọrụ mbụ enweghị ọkpụkpụ ọkpụkpụ, efere nwughari ahụ na-ahụ na ọ ga-enwe oge dị oke oke, ọ ga-arụkwa ọrụ ọkpụkpụ nke abụọ iji kwado ya nwughari pate).
• pitch-ahiri nke nwughari efere bụ a kapịrị ọnụ imewe maka fixation n'oge ọrụ, mma nchegbu ịta onu na kpọmkwem ebe na ike ọgwụgwụ.
• otu onu họrọ uzo abuo: ikpochi maxillofacial nwughari anatomical plate nwere ike imata uzo abuo abuo: ekpochi ma ghara igbachi. Mkpọchi mkpọchi gbanwere ọkpụkpụ ọkpụkpụ ma n'otu oge ahụ mechie efere ahụ, dịka nkwado nkwado na mpụga mpụga. Ihe na-enweghị mkpọchi mkpọchi nwere ike ịme nkuku na mkpakọ.
Abịa na ịghasa:
φ2.4mm onwe-na ịme ọpịpị ịghasa
φ2.4mm mkpọchi mkpọchi
ọgwụ mgbochi mmiri ọgwụ φ1.9 * 57 * 82mm
obe isi ịghasa ọkwọ: SW0.5 * 2.8 * 95mm
ogologo ngwa njikọ njikọ
Dị ka akụkụ dị mkpa nke ihu iji nọgide na-enwe mma, ọdịdị nke nwoke ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na ọdịdị ihu. Nrụrụ nke nkwonkwo ahụ abụghị naanị na ọ na-emetụta ọdịdị onye ọrịa ahụ, kamakwa ọ na-akpata ọdịiche dị na ịta nri, ilo, ikwu okwu na ọrụ ndị ọzọ. -enye ọnọdụ bụ isi maka mgbake nke ọrụ physiological postoperative dị ka ịta nri, ilo na ikwu okwu.
Ihe kpatara nkwarụ siri ike
Ọgwụ tumo: ameloblastoma, myxoma, carcinomas, sarcomas.
Ọrịa na-emerụ ahụ na-emerụ emerụ: ọtụtụ mgbe na-esite na nnukwu ọsọ ọsọ dịka mmerụ ahụ, ihe ọghọm ụlọ ọrụ, na mgbe ụfọdụ ọgba aghara ụgbọ ala.
Ọnọdụ inflammatory ma ọ bụ na-efe efe.
Mgbaru Ọsọ nke nwughari
1. Weghachite ọdịdị mbụ nke ala nke atọ nke ihu na mandible
2. Nọgide na-eme ihe na-aga n'ihu ma weghachite mmekọrịta ọnọdụ gbasara ohere dị n'etiti anụ ahụ na anụ ndị gbara ya gburugburu
3. Weghachi ezigbo nri, ilo, na ọrụ okwu
4. Nọgide na-enwe ọdụ ụgbọelu zuru oke
E nwere ụdị microreconstruction anọ nke ntụpọ mandibular .Trauma na tumo resection nke mandible nwere ike imetụta ọdịdị ma duga mpe mperi arụmọrụ dịka malocclusion n'ihi mmerụ ahụ na-adịghị n'otu akụkụ. emeputara, na ihe isi ike nke nwughari nke oma nke ndi mmadu na-adighi nma na nhoputa nke usoro kachasi nma.N'ihi mgbagwoju anya nke ihe ojoo di iche iche, usoro nke nhazi usoro na usoro ọgwụgwọ anabataghi nke oma. gha gosipụtara usoro nhazi ọhụụ dị mfe na usoro kwekọrọ na ya maka nwughari na ndozi nke ihe siri ike site na omume, nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ kachasị ọhụrụ nke PRS. Nhazi ọkwa a na-elekwasị anya na iguzosi ike n'ezi ihe na mpaghara onye nnata, na-elezi anya idozi ihe dị mgbagwoju anya A na-ebu ụzọ kee ụzọ anọ n'ime ụzọ anọ dịka mgbagwoju anya nke ịwa ahụ nwughari. Midline nke dị n'okpuru ebe ahụ bụ ókè. 1dị nke 1 nwere ntụpọ otu akụkụ nke na-emetụtaghị akụkụ ahụ dị egwu, ụdị nke abụọ nwere ntụpọ dị iche iche metụtara akụkụ ahụ dị egwu, ụdị nke atọ nwere nkwarụ ọ bụla metụtara n'akụkụ abụọ nke akụkụ ahụ, na ụdị nke 4 nwere nkwarụ ọ bụla metụtara akụkụ ahụ. A na-ekewa ụdị nke ọ bụla n'ime ụdị A (nke bara uru) na ụdị B (ọ gaghị adị mkpa) dabere na arịa ụgbọ mmiri dị mma maka anastomosis. Dị B chọrọ anastomosis nke arịa ụgbọ mmiri na-emegide onwe ha. Maka ụdị 2, ọ dị mkpa iji gosi ma usoro condylar ọ dị iji kpebie ụdị ihe eji eme ihe: Ntinye aka na-emekọ ihe ọnụ bụ 2AC / BC, ọ nweghịkwa njikọ condilar bụ 2A Na-adabere na nhazi ọkwa dị n'elu ma na-atụle ntụpọ anụ ahụ, ogologo ntụpọ ahụ, mkpa maka dentures, na ọnọdụ ndị ọzọ pụrụ iche, onye dọkịta na-awa ahụ na-ekpebi ụdị mpempe akwụkwọ a na-akwụghị ụgwọ.
Ebumnuche nke eji emezigharị ihe eji eme ihe maka ịwa ahụ na ịwa ahụ maximlofacial, trauma na ịwa ahụ ọzọ. Nke a na-agụnye nwughari ihe eji eme ya, mmebi iwu na ịghachi nwa oge na-echere oge nwughari nke abụọ, gụnyere mgbawa nke ihe ngosi na / ma ọ bụ atrophic mandibles, yana mgbaji na-adịghị agbanwe agbanwe. Uru Ndidi - site na ị nweta nsonaazụ ịchọ mma na-enye afọ ojuju ma belata oge ị na-arụ ọrụ. Ndetu Ndị Na-ahụ Maka Ndokwa Maka Ndabere Na-ewepụ nrụgide nrụgide na-ebute site na efere efere.
Nke gara aga: mkpọchi nwughari maxillofacial nwughari 120 Celsius L efere (ndu ndu)
Osote: orthodontic ligation ntu 1.6 onwe mkpọpu ala & ịme ọpịpị
Ikpochi Maxillofacial 120 ° Arc Plate
Mkpọchi Maxillofacial Rectangular Plate
Ikpochi Maxillofacial Straight Bridge Plate
Ikpochi Maxillofacial Straight Plate
maxillofacial trauma mini 110 Celsius L efere
kpochidoro maxillofacial mini ogologo akwa
orthodontic ligation ntu 2.0 onwe mkpọpu ala ...
akpọchi maxillofacial micro arc plate
maxillofacial trauma mini abụọ Y efere